Iflethi ephakathi eqaqambileyo nepholileyo e-Inverurie - I-Airbnb
Iflethi ephakathi eqaqambileyo nepholileyo e-Inverurie
Lo mgangatho wokuqala ukhaphukhaphu, uqaqambileyo kwaye unomoya weflethi omiswe kwindawo esembindini sisiseko esifanelekileyo sokuphonononga uyolo lwedolophu yentengiso exakekileyo ye-Inverurie, kunye nokuya kude. Yimizuzu nje emi-5 ukuhamba ukuya kwisikhululo sikaloliwe, ivenkile enkulu kunye nezinye izinto zalapha ekhaya.
Iflethi ineempawu ezithandekayo zemveli kuyo yonke indawo kodwa yenziwe yangoku ngokupheleleyo, iqinisekisa ukuhlala kamnandi. Ababuki zindwendwe baya kuba bekhona ngexesha lokuhlala kwakho kwaye bayakuvuyela ukwabelana ngolwazi lwabo ngendawo yendawo ukuba kuyafuneka!
Ifulethi lonke linendawo yokuphumla eqaqambileyo, igumbi lokulala eliphindwe kabini elithe cwaka elingasemva kwepropathi, igumbi lokuhlambela langoku kunye nekhitshi elungiselelwe kakuhle. Kukwakho negumbi lokulala elaneleyo kunye nepaseji yendawo yokugcina ukuze iindwendwe zisebenzise.
Iflethi ixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye inegesi esembindini yokufudumeza, iWifi, iSmart TV eneNetflix njl njl ezithi zonke zibe negalelo ekuqinisekiseni ukuba iindwendwe zinokuphumla kwaye kumnandi ukuhlala.
I-Inveurie yidolophu echumayo yentengiso kumbindi we-Aberdeenshire, iyenza ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yokujonga iindawo ezininzi ezinomtsalane ezifumanekayo eMantla Mpuma, ezinje ngokhenketho lwe-whisky distillery, iitrayile zenqaba, umkhondo wePictish, induli/ukuhamba elunxwemeni, ukuloba kunye nokuloba. ukuthatha isampuli ukutya kwasekuhlaleni.
Kumnyango weflethi, iindwendwe zinokonwabela ukutyelela enye yeekhefi/iibha zalapha ekhaya ezifana ne-French delicatessen ethandekayo kunye necafe I-Kilted Frog kunye ne-BrewDog craft beer pub. Kwiindawo zokutyela, iindwendwe zinokonwabela ukhetho lokutya kwamaIndiya, isiThai, isiTaliyane kunye nesiScottish-yonke imizuzu ihamba kude neflethi.
Ababuki zindwendwe banokuqhagamshelwana nabo ngefowuni, ngetekisi okanye nge-imeyile kulo lonke ixesha lokuhlala kwakho kwaye uhlala ekuhlaleni ngoko ke bakhona ngalo lonke ixesha ukuba kuyimfuneko.